भोलि माघ १८ गते मंगलबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि माघ १८ गते मंगलबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
admin January 31, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 192 Views
उग्र स्वभावमा ध्यान राख्नुहोला । शारीरिक र मानसिक रुपले शिथिलताको अनुभव गर्नुहुनेछ । अधिक परिश्रमपछि सफलता पाउनुहुनेछ । सन्तानको विषयमा तपाईको चिन्ता रहनेछ। कार्यको भागदौडको कारण परिवारमा कम ध्यान जानेछ। हानिकारक विचार, व्यवहार न र आयोजनबाट टाढा रहनुहोला।
तपाईको कार्य गर्ने दृढ़ मनोबल र आत्मविश्वासको पूरा स्श्योग मिल्नेछ । यस कार्यको फल पनि अपेक्षानुसार मिल्नेछ। माईतबाट लाभ मिल्नेछ।अभ्यासमा विद्यार्थीको रुचि रहनेछ। सरकारी क्षेत्रमा लाभ मिलेछ तथा आर्थिक व्यवहार गर्दा सफलता मिल्नेछ।
नयाँ परियोजनाको लागि दिन शुभ रहेको छ । सरकारको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ । व्यावसायिक वा व्यापार क्षेत्रमा तपाईलाई उच्च अधिकारीको राम्रो प्रतिसाद प्राप्त हुनेछ। मित्र वा आफन्तसँग अनबन हुनेछ। त्यसको सकारात्मक परिणाम आउनेछ । प्रतिस्पर्धिमा विजय प्राप्त हुनेछ।
नकारात्मक मानसिकतामा व्यवहार नगर्नुहोला । शारीरिक र मानसिकरुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। मनमा दुःख र असंतोषको भावना रहनेछ । आँखामा पीडा हुन सक्ला। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहनेछैन। पारिवारिकसँग गलत विचार धारणा हुन सक्ला। अनैतिक प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुहोला। अधिक खर्च हुनेछ ।
आत्मविश्वासको मात्रा अधिक रहनेछ। कुनै पनि कार्य गर्नको लागी इर्ने लिनुहुनेछ। बुबा र ठुलोबाट लाभ मिल्नेछ। सामाजिकरुले मान-सम्मान वृद्धि हुनेछ। बोलि र व्यवहारमा उग्रता नदेखाउनुहोला। क्रोधको मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहनेछ।
शारीरिक रुपले शिथिलता र मानसिकरुपले चिन्ता बनिरहनेछ। मित्र र आफन्तसँग वैचारिक स्तरमा मनमुटाव हुनेछ। स्वभावमा उग्रता र क्रोधको आअत्र विशेष रहनेछ। धार्मिक कार्यमा पैसा खर्च हुनेछ। स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान राख्नुहोला। धनको आकस्मिक व्यय हुन सक्छ।
दिन शुभफलदायी रहनेछ। विविध क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। तपाईको प्रसन्नता वृद्धि हुनेछ। तपाईको आय वृद्दि हुनेछ। मित्रजनको लागि खर्च गर्नुहुनेछ। कुनै यात्रा वा पर्यटन स्थलमा जानाले दिन रोमांचक बन्नेछ । विवाहोत्सुकले जीवनसाथी प्राप्त गर्नेछन्।
तपाईको दिन तपाईको लागि शुभ फलदायी रहेको छ। व्यावसायिक स्थलमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। उच्च अधिकारीगण प्रसन्न रहनेछन्। कार्य सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। मान-प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। पेसामा पदोन्नति हुनेछ । गृहस्थजीवनमा आनन्दको वातावरण छाईरहनेछ। व्यापारको उद्देश्यमा कतै बाहिर जानुहुनेछ।
स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। शारीरिक रुपले अशक्ति र आलस्यको भावना रहनेछ । मानसिकरुपले चिन्ता र व्यग्रता रहनेछ। व्यावसायिक रुपले विध्न आउन सक्छ। उच्च अधिकारीसँग घर्षणको प्रसंग उपस्थित हुनेछ । प्रतिस्पर्धि र विरोधीसँग विवाद नगर्नुहोला।
आकस्मिक धनखर्च हुने योग रहेको छ , व्यावहारिक र सामाजिक कार्यको लागी बाहिर जानुहुनेछ। खान-पानमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। क्रोधबाट बच्नुहोला। नकारात्मक भावनाले सकारात्मकताबाट टाढा रहनुहोला। व्यावसायिक स्थलमा अनुकुलता रहनेछ। सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा तपाई आफ्नो योग्यताको सदुपयोग गर्नुहुनेछ।
प्रत्येक कार्य दृढ मनोबल र आत्मविश्वासपूर्वक गर्नुहुनेछ। यात्रा वा पर्यटनको सम्बाह्व्ना रहेको छ। स्वादिष्ट व्यंजनको भोग वा नयाँ वस्त्र परिधानको प्रसंग उपस्थित हुनेछ। साथीबाट लाभ मिल्नेछ। सुख प्राप्त हुनेछ ।
दिन शुभफलदायी रहेको छ। मनोबल र आत्मविश्वास अधिक रहनेछ। शारीरिक रुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण शान्तिपूर्ण रहनेछ। प्रतिस्पर्धि समक्ष विजय प्राप्त हुनेछ । आवेश र उग्र स्वभावलाई टाढा राख्नुहोला।
Previous …त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….! २ मिनेट समय दियर पधुनु होस।।
Next सरकारले किन ल्याउँदै छ राष्ट्रिय परिचयत्रपत्र? यसले के-के काम गर्छ?